Iyo Apple patent inoisa makamera pane Apple Tambo tambo | Ndinobva mac
Iyi patents haina kumira uye inoratidza basa rinoitwa neApple mune ese mativi emidziyo yavo. Iye zvino patent inouya pachiedza inoratidza mukana wekuve nekhamera pane tambo yeApple Watch iyo nekusimudza ruoko rwako tora pikicha.
Izvi mabasa aizove ari pachena anosanganisira software yechigadzirwa uye Hardware. Hurefu hudiki hwemakamera uye nekuvandudzwa kwesoftware kunoratidza kuti chero patent inogona kuitika, kana zvisiri izvo zvaizove munguva. Kune rimwe divi, avo vedu vanga vachiona Apple nhau kwenguva yakareba vanoziva kuti mhando iyi ye patent inogona kana kusazove yechokwadi zvichienderana nezvinhu zvakawanda, asi kazhinji vanopedzisira vangova mumwe chete pachinyorwa.
Muchokwadi, aya marudzi epatent anoita kuti tifungidzire wachi yakazadzwa nenhumbi uye akasiyana mabasa kupfuura iwo atova nawo.. Mune ma patents ese aya chinhu chakakosha kufunga zvishoma nezveramangwana uye usatende kuti ndezvezvishandiso zvazvino. Uye zvakare, mamwe acho anonyatsobatsira asi mune ino kesi, kunyangwe kuve nekamera muApple wachi yakange iri nhau inodzokororwa pamusoro pemakore, isu hatina kuona kubatsira kwayo. Kana ikasvika, ichasvika, asi isu hatitende kuti yakakosha kunguva dzazvino.
Zvishongedzo zveApple Watch mabhendi isu takaona akawanda, akafanana patent kune izvi zvichangoburitswa futi, uye muzviitiko zvakawanda vanopedzisira vasiri kunyatso kubatsira kana kubatsira kuita. Saka inguva yekuenderera mberi nekuona irwu rudzi rwepamutemo sechinhu chiri kure, zvinogoneka mune dzimwe nguva uye pamusoro pese senzira yeApple yekuwana vamwe usashandise iyi patent tekinoroji usingapfuure mubhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple patent inosungira makamera kuApple Tambo tambo